Sarotra ho azy ireo ny ho madio raha tsy mifanaraka amin'ny toe-batany ny fotodrafitrasa atao - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Teny Mahitsy indray ireo mpanentana ao amin’ny Wateraid niaraka tamin’i Rajao no nanao ny fanentanana mba tsy hanilihana ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy bevohoka, indrindra eo amin’ny trano fivoahana sy fidiovana ary koa ny fantsakana lavitry ny trano. Nanohy ny Kaominina VENI na vovonana ekentsika iaina mendrika sy salama.
Sarotra ny ho madio raha tsy ampifanarahana amin'ireo mpiara-belona amintsika ny fotodrafitrasa atao. Tena mijaly tokoa ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy bevohoka manoloana ny fotodrafitrasa tsy mifanaraka amin’ny toe-batan’izy ireo. Tsapan’ireo olona nentanina izany nandritra ny fotoana niarahana satria nasaina nipetraka vetivety teo amin’ny toeran’ireo olona manana fahasembanana izy ireo. Hiezaka izy ireo hanampy fa tsy hanilika ny olona manana fahasembanana no sady hanao ny trano fivoahana sy fidiovana hifanaraka amin’ny toe-batan’ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy bevohoka any amin’ny misy azy. Misy amin’izy ireny manko no mandeha mantsaka lavitra, ary misy ihany koa ireo vehivavy bevohoka sady mitrotro no mandeha maka rano hikarakarana ny tokantrano.
Nahagaga ny mpanatrika rehetra ny fanazaran-tena. Betsaka no nibaboka fa tsy nanampo ny hahita seho toa izany mihitsy izy ireo. Fijaliana be loatra ho an'ireo olona manana fahasembanana amin'ny trano fidiovana sy fivoahana ary fantsakana lavitra ny trano tsy mifanaraka amin’ny toe-batany. Izay no nambaran’ireo olona tsy manana fahasembanana rehefa nasiana niaina kely ny manjo ireo olona manana fahasembanana sy vehivavy bevohoka.
Faha 14 farany tamin’ireo kaominina 14 ny fanentanana natao teny Mahitsy ny sabotsy 16 oktobra 2021 lasa teo. Mbola betsaka ireo ezaka tokony hatao. Mila mandray andraikitra bebe kokoa amin’izany ihany koa ny fitondrana satria filana fototra ihany koa ny fananana trano fivoahana sy fidiovana, indrindra fa ny rano fidiovana sy fanadiovana sady tsy vitan’ny olon-tsotra ireny izany fa mila atao tetikasa sy ampidirina amin’ny tetibolam-panjakana.